भोटेकोशी बाढी : जन्मदिन मनाउने योजना अधुरै रह्यो – Sanchar Patrika
July 10, 2020 230
सिन्धुपाल्चाक । बाह्रविसे नगरपालिका ५ जम्बुका २२ वर्षीय निकेश बस्नेत बिहीबार आफ्नो २३ औं जन्मदिन परिवारका साथ बसेर मनाउने योजनामा थिए । परिवारसँगै बसेर जन्मदिन मनाउने तयारीका साथ बेलुकी परिवारसँगै खाना खाएर सुतेका निकेशले अब जन्मदिन कहिल्यै मनाउन नपाउने गरी सधैंका लागि बिदा भएका छन् ।
‘बेलुकी हामीसँगै खाना खाएर सुतेका थियौं, केही समयमा नै जम्बुको याल्मो खोला उर्लेर बजारमा पस्यो छोरा मात्रै होइन परिवार नै सखाप बनायो’, जम्बुमा रहेका निकेशका बुबा माधवकुमार बस्नेतले भने । निकेश तीन वर्षीया छोरी नियोनीलाई खोकीलामा च्यापेर सुतेका थिए ।
बाढीको पहिलो झट्कामै निकेशको ज्यान गयो । श्रीमतीले छोरी लिएर बाहिर निस्कन मात्रै के आँटेकी थिइन् बाढीको हावाले आमाछोरीलाइ पनि छुट्याइदियो । तर आमाको मन न हो निकेशकी श्रीमतीले छोरी छाड्न सकिनन् र बाढीको छालमै छोरी समाउन हेलिइन् । केही समय आमाछोरी सँगसँगै जस्तै बगे । केहि बेरमै आमालाई सख्त घाइते बनाएर छालले पाखामा फालिदियो तर उनकी छोरी कता लग्यो पत्तो भएन । बिहान छोरी मृत भेटिइन् । निकेश र उनको छोरीको बाढी पहिरोमा परेर मृत्यु भयो भने श्रीमतीको अहिले उपचार भइरहेको छ ।
यस्तो पीडा जम्बुको बस्नेत परीवारमा मात्रै हैन यहाँका दर्जनौं परीवारमा सहि नसक्नुका घटना पीडादायी भएर आयो याल्मो खोला । अविरल वर्षसँगै भोटेकोशी नदी आसपसाका खहरे खोला उर्लेर आउदा जम्बु बस्ती नै सखाप भयो । परिवारका सबै सबै वेपत्ता भएका छन् । बेपत्ताहरुको अहिलेसम्म खोजबिन भइरहेपनि खराब मौसमाका कारण कसैलाई पनि फेला पार्न नसकिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रविसेका प्रहरी निरीक्षक नवराज न्यौपानेले जानकारी दिए ।
गोरुले बचायो ज्यान
दिनभरी असारको मेलो गरेर बजार भन्दामाथि काभ्रे गाउँ पुगेका जम्बुका तोकबहादुर तामाङका भाइले आफना बाउआमा, भाइ बुहारीहरुलाई पनि गाउँमै जाउँ भनेका थिए उनीहरुले मानेन । बजारमा गोरु बाध्ने ठाउँ नभएकाले तोकबहादुरका दाइ हल गोरु लिएर माथि गाउँ नै गएका थिए । गोरु लिएर जाँदा राति भएपछि उनी माथि गाउँमा नै बसे तर बजारमा खहरे उर्लेर आउँदा सकुशल छाडेर गएका परिवार एक जना पनि बाँकी रहेनन् ।
‘बेलुका यही सारसौदो छाडेर गएका मेरा घरका पाँच जनाको नामो निसानै बाँकी रहेनन् । मैले घर जाउँ भनेको मानेनन्, अहिले यस्तो देख्नु प-यो’ तोकबहादुरका भाइले भने, ‘गोरु नभएको भए म पनि यतै बास बस्ने थिएँ, मलाई चै गोरुले बचायो ।’
थैलीले गर्दा आमाको ज्यान गयो
जम्बु घटनामा स्थानीय माइली तामाङ पनि बेपत्ता भएकी छिन् अघिपछि बाढी आउँदा बाह्रबिसे साइडको डाँडोमा भाग्ने गरेकी उनी यस पटक पनि साथीहरुसँग डाँडामा आइ सकेकी थिइन् । बाढी कत्रो आउँछ आँकलन गर्न नसक्दा कालको मुखबाट उम्की सकेकी उनी फेरी घर भित्रै गइन् । पछि थाहा भयो उनी घर भित्र छुटेको आफनो थैली लिन गएकी थिइन् ।
उनका छोरा दावा तामाङका अनुसार आमाको पोल्टामा हमेशा दुई चार हजार पैसा जगेडा रहन्थ्यो । यस पटक ठुलो बाढी आएको आमालाइ पतै भएन । अघिपछि झैं सम्झेर थैली लिन जानु भयो त्यहि थैलिले आमाको ज्यान लियो दावाले भने
Prevरवि लामिछाने आफ्नो टीम सहित लागे प्रदेश एक तर्फ (तस्बिरहरू सहित)
Nextसावधान ! बढ्न थाल्यो कोरोनाको खतरा, केहि दिनमै शरीरबाट हराउँदैछ कोरोना ‘एन्टीबडी’
लोडसेडिङ सुरु हुने यस्तो लक्षण बाहिरियो।अब के होला?
BREAKING NEWS – फेरि १८ दिन सम्म देशभर सम्पुर्ण कुरा बन्द रहने ! भर्खरै गरियो यस्तो निर्णय !
कमिसनको लोभमा पर्यटनमन्त्रीले साउदीमा अलपत्र नेपालीलाई निशुल्क उद्दार गर्ने प्रस्ताव रोके !
मिटर रिडिङ नभएका कारण विद्युत् ग्राहकलाई जरिवाना नतिराउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन